समाचार - वायरलेस चार्जर के हो?
MFI प्रमाणित उत्पादनहरु
डेस्कटप वायरलेस चार्जर
वायरलेस चार्जर खडा
चुम्बकीय वायरलेस चार्जर
लामो दूरी वायरलेस चार्जर
उत्पादन परीक्षण र मूल्यांकन
वायरलेस चार्जर के हो?
वायरलेस चार्जिंग तपाइँ केबल र प्लग बिना तपाइँको स्मार्टफोन को ब्याट्री चार्ज गर्न दिन्छ।
धेरै जसो वायरलेस चार्जि devices यन्त्रहरु एक विशेष प्याड वा सतह जसमा तपाइँ आफ्नो फोन राख्न को लागी चार्ज गर्न को लागी राख्न को रूप मा लिन्छन्।
नयाँ स्मार्टफोन एक वायरलेस चार्ज रिसीभर मा निर्मित गर्न को लागी हुन्छन्, जबकि अरु लाई एक अलग एडाप्टर वा रिसीभर को लागी उपयुक्त हुन आवश्यक छ।
तपाइँको स्मार्टफोन भित्र तामा बाट बनेको एक रिसीभर प्रेरण कुंडल छ।
ताररहित चार्जर एक तामा ट्रान्समिटर कुण्डल समावेश गर्दछ।
जब तपाइँ चार्जर मा तपाइँको फोन राख्नुहुन्छ, ट्रान्समीटर कोइल एक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न गर्दछ कि रिसीभर फोन को ब्याट्री को लागी बिजुली मा परिवर्तित हुन्छ। यो प्रक्रिया लाई विद्युत चुम्बकीय प्रेरण भनिन्छ।
किनकि तामा रिसीभर र ट्रान्समीटर कोइलहरु साना छन्, वायरलेस चार्ज मात्र धेरै छोटो दूरी मा काम गर्दछ। घरेलु उत्पादनहरु जस्तै इलेक्ट्रिक टूथब्रश र शेविंग रेजर पहिले नै धेरै बर्षहरु को लागी यो प्रेरक चार्जिंग टेक्नोलोजी को उपयोग गरी रहेको छ।
जाहिर छ, प्रणाली बिल्कुल वायरलेस छैन किनकि तपाइँ अझै पनी चार्जर मुख्य वा एक USB पोर्ट मा प्लग गर्न को लागी छ। यसको मतलब यो हो कि तपाइँ कहिल्यै तपाइँको स्मार्टफोन मा एक चार्जिंग केबल जडान गर्न को लागी छैन।
पोस्ट समय: नोभेम्बर 24-2020